Nin Taajir ah oo Sheegay maalkiisa in uu ka Bilaabay Lacag uu xaday | Biyoguurenews.com
Home Wararka Nin Taajir ah oo Sheegay maalkiisa in uu ka Bilaabay Lacag uu...
Nin Taajir ah oo Sheegay maalkiisa in uu ka Bilaabay Lacag uu xaday
Barnaamijka taxana ah BBC-da ee The Boss series oo ah mid lagu wareysto hogaamiyeyaasha ganacsiga ee caalamka ayaa toddobaadkan waxaan diiradda kuu saareynaa Andrew Michael oo ah nin ka macaashay shirkad dhanka tiknolojiyadda ah.
Markii uu Andrew jiray 17 sano, waxaa uu go’aan ku gaaray in uu wax ka baddalo noolashiisa, isagoo na tallabaadaasi ku qarash gareeyay lacag dhan 40 kun oo doolar oo ay laheyd hooyadii oo aanan ka warheyn lacagta uu ka xaday.
Sannadkii 1997-kii waxa uu magaalada Cheltenham ee galbeedka England kula noolaa hooyadii, xiligaasi oo uu soo ogaaday fursad maal-gashi.
Waxaa uu aad u rabay in isgaa iyo saaxiibkii ay isku iskoolka yihiin ay sameystaan mareeg ama shabakad dhanka intarnetka, isagoona ogaaday in shirkado dhowr ah oo hirgaliya wabsite-yada aysan hunguriyaynin ganacasiyada yaryar.
“Dhammaan shirkadaha hirgaliya website-yada U.K ee xiligaasi waxay ahaayeen shirkado waaweyn”Waxaa sidaasi sheegay Andrew oo ay hadda da’diisu tahay 39 jir, waxaana uu intaa raaciyay in shirkadaha yaryar iyo shakhsiyaad ay doonayeen mareeg uu hirgalisa wabsite aad u sahlan oo uu qofka adeegsan karo.
Isaga iyo saaxiibbadii waxay go’aansadeen inay buuxiyaan baahidii ka jirtay dhanka suuqa, waxaana ay aasaaseen mareeg ama website ay iyagu leeyihiin oo lagu magacaabo Fasthosts.
“Waxaan qolkeyga ku heysanay Kumbuyuutarradii aan u baahneyn, oo waxaan sameysanay aalad, waxa kaliya ee aan u baahneyn ayaa waxay ahayd intarnet xawaarihiisu dheereeyo oo xiligaasi aad u adkaa, lacagtii ku bixi lahayd na aanan haysan.” Ayuu raaciyay Andrew.
Markii ay xaaladdu ku adkaatay Andrew ayaa waxa uu go’aansaday in uu xado lacag ku jirtay kaarka bangiga ee hooyadii, waxaana uu ku sameystay Intarnet xawaaro fiican iyo xayeysiimo.
Waxaa uu Andrew ku rajo weynaa in ganacsigiisa uu noqdo mid guuleysta, oo bilooyinka ugu horeeya uu isbixiyo.
Nasiib wanaag! saddexdii bilood ee ugu horresay waxay heleen macaamiil iyo lacag ay isaga bixiyaan kharashaadka intarnetka iyo xayeysiinta.
Muddo yar kadib lacagtii uu xaday waxaa u cafiyay hooyadii. Dhammaan saaxiibbadii waxay iska sii wateen waxbarashadooda, halka Andrew na uu isaga haray jaamacadda, oo waxaa uu diiradda saaray ganacsigiisa.
Ninkan dhalinyarada ah ayaa waxaa uu la kulmay ganacsato caan ah oo uu kamid yahay Richard Branson oo kamid ah ganacsatada ugu lacagta badan caalamka.
Sagaal sano kadib markii uu asaasay shirkadda Fasthosts, waxa uu iska iibiyay saami ku kacay lacag dhan 61.5 milyan oo gini, halka da’diisu marka ay ahayd na 26 jir uu haysatay saami dhan boqolkiiba 75 oo u dhigma 46 milyan oo gini.
Laba sano kadib Andrew waxaa kale oo uu sameystay shirkad kale oo keydisa maclumaadka ama xogta dadka taasi oo lagu magacaabo Livedrive oo markii dambe uu ku iibiyay lacag uusan sheegin tiradeeda.
Andre waxaa uu ku dhashay dalka Qubrus, balse waxaa uu ku soo barbaaray magaalada Cheltenham ee dalka Ingiriiska, waxaana uu sheegay in fikradaha ganacsi uu ka dhaxlay aabihii oo ganacsi yar lahaa.
Previous articleMuuqaal Somaliland Oo Kaalin Hore Ka Gashay Dalalka Ugu Wacan Xoriyada
Next articleIlhaan Cumar oo Yuhuuda siisay Raali galin, waa maxay se Sababtu
Sidee buu Xisbi u xulan karaa hogaamiye siyasadeed oo guul dhalin kara,
10 xildhibaan oo baarlamanka ugasoo baxay saaxil oo booqday berbera
Qaramada Midoobay oo hakisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay gobolka Tigray
Sidee buu Xisbi u xulan karaa hogaamiye siyasadeed oo guul dhalin...
Hadal hayn ka dhalatay atoore caan ah oo toogtay sawir qaadihii...
Xogo Dheeraada Oo Laga Helayo Sababta Ay Diyaaarada Fly Dubai Ujoojisay...